Phumla - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNatalia
Yindlu entsha, eqaqambileyo nephangaleleyo, ixhotyiswe ngokupheleleyo, inepatio entle enegadi kunye nedama lokuqubha.
I-El Descanso yenzelwe njengendawo yokubaleka kwingxolo yesixeko kunye noxinzelelo lwemihla ngemihla, ukuphumla kunye nokuphumla. Ime kwindawo ecwangcisiweyo yesixeko, apho iindawo eziluhlaza zininzi, unokufikelela ngokulula kwiNdlela yeSizwe ye-9 kwaye uyimizuzu nje ukusuka kwiziko lezoqoqosho, lezentlalo nenkcubeko lesiXeko.
Ngoxa wakho uya kufumana indlu baxhotyisiwe ebhedini nakwibhafu amashiti, eshushu / kubanda, izimiso umoya, irhasi neenkuni ubushushu, izitya epheleleyo, ikhitshi, microwave, iketile yombane, isikhenkcezisi / ifriji, ipizza eziko kunye ngumngundo zayo, pfumerile nayo yonke izixhobo, i-tv, ukufikelela kwi-DTV, i-Flow kunye ne-Netflix, i-stereo, i-wifi kunye netafile ye-ping pong eneepaddles kunye neebhola.
Nangona i-El Descanso yimizuzu embalwa ukusuka kwiziko lezoqoqosho, lentlalontle kunye nenkcubeko, kwindawo ekufutshane uneefama ezininzi, iindawo zokugcina iimpahla kunye ne-kiosks apho ungagcina khona.
Umbuki zindwendwe ngu- Natalia
Ndihlala iibhloko ezimbalwa ukusuka apho kwaye ndiya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.